Kurume 8 dambudziko, AirPods Max kugadzirisa uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Svondo rakakosha uye rizere ne runyerekupe nezve chiitiko icho Apple ichave ichigadzirira anotevera Kurume 23 maererano nevazhinji venhau. Vhiki rino takaona nhau dzinoverengeka dzakakosha muApple nyika uyezve tinoshuva kuziva kana tichava nemharidzo kana kwete.
Chokwadi ndechekuti svondo raive rakabatikana kunyangwe ne AirPods Max kugadzirisa pakati pedzimwe nhau uye nhau kubva kuApple nyika.
Isu tinotanga nenhau dzeApple Dambudziko ratinahwo gore rega munaKurume 8, iyo Zuva Revanhukadzi Zuva. Sezvo zvave zvichiitika gore rega rega, kambani inowedzera ichi chinetso chevashandisi veApple Watch uye neizvi zvinogonekwa kuti vanhu vanofamba zvishoma uye vanowana hutano hushoma. Wakawana menduru here?
Chimwe chakasimbiswa svondo rino ndeye kusvika kweshanduro yepamutemo ye macOS Big Sur 11.2.3 kune vese vashandisi. Mune iyi vhezheni Apple yakagadzirisa matambudziko akati wandei ekuchengetedza saka zvinonakidza kuve nemidziyo yakagadziridzwa kune iyi vhezheni.
Uye kutaura nezvekuvandudzwa isu hatigone kukanganwa nezve iyo yechipiri yepamutemo firmware vhezheni yeAirPods Max. Aya maAppphone mahedhifoni agamuchira nyowani firmware vhezheni uye zvinokwanisika kuti mamwe matambudziko nekuzvimiririra kweaya anogadziriswa, kunyangwe ruzivo rweiyo nyowani vhezheni harizivikanwe.
Kupedzisa pfupiso ipfupi nedzimwe dzenyaya dzakatanhamara vhiki rino, haugone kupotsa runyerekupe nyowani kana nhau nezve mota yeApple. Zvino zvinoita sekudaro Foxconn naMagna ndivo vaizotungamira mukugadzira iyi mota yeApple. Runyerekupe rutsva rwusiri rwepamutemo uye kuti isu tichafanirwa kuona shanduko yaro nekufamba kwenguva. Nezve mota yeApple pane dzakawanda nhau nhasi asi hapana kongiri ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kurume 8 dambudziko, AirPods Max kugadzirisa uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Disney + inodarika zana mamirioni vanyori